खाडी देशमा काम गर्नेहरुमा मिर्गौला बिग्रिने समस्या किन बढी ?
Fri, Jun 22, 2018 | 07:25:06 NST
डा. बिष्णु पहारी-
केही वर्षयता संसारभर मिर्गौला रोगीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल लगायतका वकासोन्मुख देशमा पनि मिर्गौला रोगीहरुको संख्या अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रुपमा बढेको छ ।
मिर्गौला रोगको सीघ्र पहिचान तथा र त्यसको समयमै निदान नै मिर्गौला स्वस्थ्य राख्ने मुख्य उपाय हो । मिर्गौला स्वस्थ्य राख्न हरेक दिन कम्तीमा तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ, मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
धुमपानको आदत भएका, ५० वर्ष भन्दा माथिका बयश्कहरु र मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई मिर्गौला रोगको खतरा बढी हुनेभएकाले हरेक वर्ष अनिवार्य रुपमा मिर्गौला परीक्षण गर्नुपर्छ ।
मिर्गौला रोग लागिसकेपछि यसको उपचार अत्यन्त महंगो भएकाले समयमै मिर्गौला परीक्षण गरी रोगको निदान र उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
संचारमाध्यमहरुको सक्रियता र विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरुका कारण बढ्दो जनचेतनास्तरले पछिल्लो समयमा उपचारको दायरामा आउनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
(डा.पहरी ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा नेफ्रोलोजी कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ ।)